အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: မုန်ညှင်းချဉ် ချဉ်ကြမယ်
Posted by တီချမ်း at 4:34 PM
" ဇလုံထဲ က နယ်ပြီးသား မုန်ညှင်းရွက်တွေကို လက်နဲ့ ညစ်ညစ်ပြီးတော့ " တီရေ အဲဒါဘာလို.ညှစ်ရတာလဲဟင် အရေစစ်တာလား
မောင်လေး January 26, 2011 at 9:26 PM
ဒီတစ်ခါ “မောင် ” လည်းမပါဘူး..........:)
Vista January 27, 2011 at 10:17 AM
အဲဒါကိုသိပ်ကြိုက်တာ ဒါမယ့်နေပြရတဲ့ ကိစ္စက ဒီမှာခက်နေတာ ဘယ်နေ့ နေသာလည်းမှန်းမရဘူး ပီးတော့နေသာနေရင်းလည်း မိုးက ကောက်ရွာချတာဆိုတော့ သိပ်စိတ်ညစ်ဖို့ ကောင်းတယ်။
အန်တီချမ်း January 27, 2011 at 12:35 PM
နေပြစရာနေရာမရှိရင် နွေးမယ်နေရာမှာ ထားလဲရပါတယ် ဗစ် ရဲ့
တီတောင် ရေခဲသေတ္တာ (အသစ်)ရဲ့ နောက်နားမှာ ကပ်ထားလိုက်တာပဲ
လူမသိသူမသိရေ>>> ရေညှစ်တယ် ဆိုတာ စကားအဖြစ်ပြောတာပါ တီနယ် တာတော့ ရေသိပ်မထွက်ဘူး အဲ့တာက နေလှမ်းတာ ပေါ်လဲမူတည်ပါတယ်
ရေတွေ ရှိနေရင်တော့ ဘူးထဲ သိပ်မထည့်ခင် နည်းနည်း ညှစ်ပေးရပါမယ် ပြီးရင် ရေကျက်အေးပြန်ထည့်တာ မှန်ပေမယ့်
နယ်ပြီးတဲ့ အခါ တော့ နည်းနည်းညှစ်ပါ (မုန်ညှင်းပြောတာနော်)
အန်တီချမ်း January 27, 2011 at 1:14 PM
(( ထမင်းတွေထည့်ထားတော့ စားတဲ့အခါ အဲ့ဟာတွေပါနေမှာလား.. ပီးတော့ တီကသာ အ၀ါနွမ်းနွမ်းတွေ အဝါဖျော့ဖျော့တွေ ပြောတာ ပုံထဲမှာကဖြင့် စိမ်း(ဟိမ်းဟိမ်း)လို့..)
အန်တီချမ်း January 27, 2011 at 1:23 PM
စားတဲ့ အခါ နည်းနည်းတော့ ပါနေမယ်
ဒါပေမယ့် သုပ်စားတာဆိုတော့ ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး
အဲ့တာက စချဉ်တဲ့ နေ့ က ရိုက်လို့လေ
သုပ်စားတဲ့ နေ့ကျရင် ထပ်တင်ပေးမယ်
Rita January 27, 2011 at 1:44 PM
အန်တီချမ်း January 27, 2011 at 1:57 PM
ရှင့် မောင် တူဘီ တော့ သနားပါတယ်
Maung January 28, 2011 at 2:00 PM
Oh! I miss my mom, she does like this also...
wanna go Home..... Thanks Addy for sharing your knowledge and good presentation.
Sa Ta Nar A yan par dar pae naw....
But Maung ma par tot ta ku ku lo nay tha lo pae naw....
Snow February 3, 2011 at 11:16 AM
ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေ ထည့်ပြီးချဉ်ရင်ရော ရလားဟင်။ ဒီနေ့ညနေ စလုပ်ကြည့်မလို့။
အန်တီချမ်း February 3, 2011 at 11:24 AM
ထည့်ချဉ်ရင်လဲ ရတယ် ဒေါ်နှင်း
တီကတော့ စားခါနီး သုပ်တော့မှထည့်တယ် အဲ့တာက ပိုမွှေးတယ်လေ
စားခါနီးကျတော့ မုန်ညှင်းချဉ် ကို ပန်းကန်ထဲထည့် ဆား အချိုမှုန့် နည်းနည်းထည့်
ပြီးတော့ ငရုတ်သီး စိမ်း နှုတ်နှုတ်စင်းထားတာလေးထည့် နံနံပင်လေးထည့် နယ်လိုက် ကောင်းမှကောင်း
တနေ့ က ကိုကိုဒေးဗစ် လာတော့ ပဲကြော်တွေ မှာလိုက်တာလေ ပါလာတာနဲ့
အသုပ်ဆိုလို့ ရှင့် ကိုသတိရသွားတာပါ
I did as you did and I got two boxes of those. I don't know how little salt I should put so I put three tea spoons on top. Is it too much? Anyway, if not ok, I'll try again.
I wanna have pea kyaw & mont tee..!! :( Will try pea kyaw by myself at home one day.
P.S. I don't see nhat pyaw uu at my place but you can replace it with kyar swal (not kyaw swe, ok? :D) and it tastes better. Enjoy!
Snow March 15, 2011 at 11:16 AM
ဒီနေ့ မုန်ညင်းချဉ် လက်ကျန် အကုန်ကုန်သွားပြီ။ အရမ်း စားကောင်းတာပဲ။ နောက်လည်း အဲလို လုပ်လုပ်ထားရမယ်။
နည်းပေး လမ်းပြလုပ်တာ အရမ်းကျေးဇူးတင်ကြောင်း လာပြောတာပါ။ :)
Squeeze the mustard leaves and transfer them to the container before adding water or after adding water?
တီချမ်း May 26, 2011 at 4:48 PM
adding water is last stage
Thank you so much!!! I'll try!!!
will try coming soon, T Chan.